Sawir caan ah oo maalintii xuska xasuuqa shiinaha laga waayay keydka sawirrada ee Microsoft – Calanka.com
Sawir caan ah oo maalintii xuska xasuuqa shiinaha laga waayay keydka sawirrada ee Microsoft
Shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in ‘cilad farsamo’ ay ugu wacneyd in mid kamid barnaamijyadeeda u qaabilsan raadinta macluumaadka Online-ka uu soo saari waayo su’aal la raadinayay oo ku saabsan ‘nin hortaagan taangiga dagaalka’
Ereygaas ayaa ka turjumayay sawir caan ah oo ku saabsan nin kaligiis dibadbaxayo oo hor taagan mid kamid taangiyada dagaalka xilli uu ku sugnaa fagaaraha Tiananmen ee Shiinaha xilli ay socdeen dibadbaxyo sanadkii 1989.
Jimcihii dadka adeegsada bartan ay leedahay Microsoft ayaa raadinayay ereyga ‘Ninkii hortaagnaa taangiga’, waxay heleen farriin ah in aysan heli karin sawirka ku saabsan ninkaas.
Waxaana lagu eedeeyay shirkadda inay hor istaageysay suurtagalnimada ah in dibadbaxyo ay ka dhacaan Shiinaha.
Ereyga “Ninkii hortaagnaa Tangiga” ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay nin aanan weligiis la aqoonsan oo hor taagan mid kamid taangiyada dagaalka bishii Juun sanadkii 1989 xilli uu ku sugnaa fagaaraha Tiananmen.
Sawirka wuxuu noqday mid caan ah oo ku turjumayo howgalkii lagu laayay boqolaal qof.
Markii Jimcihii dad ku sugnaa dalalka UK, Mareykanka iyo Singapore ay isku dayayeen inay raadiyaan sawirka si loo xuso 32- sanoguuradii kasoo wareegtay xasuuqaas, waxaa usoo baxay in aysan arki karin sawirka.
Shiinaha ayaa si weyn uga hor istaagtaa dadka in baraha bulshada ay kusoo hadal qaadaa wixii ka dhacaya fagaaraha Tiananmen.
Shirkadda Microsoft waxay sheegtay inay jireen khaladaad farsamo balse si dhab ah ay ciladda u xallinayaan.
Balse agaasimaha ha’yadda Human Rights Watch ayaa sheegay in arrinta ay qaadan waayeen markii sawirka ‘ninka’ uu soo bixi waayay.
Saacado kadib waxaa markii la tebiyay ciladda, waxaana markii dambe soo muuqday sawirka ee la raadinayay ee ku saabsan ninka hor taagan taangiga dagaalka.